> Resource> Android> Olee naghachi ehichapụ Pictures si Photon 4G
Motorola Photon 4G mgbake: accidentially ehichapụ nwa m photos!
Mmadụ na mberede deletee m nwa foto site na m Motorala Photon 4G! Bụ n'ebe ọ bụla ụzọ naghachi ha? M nwụrụ anwụ anụ! Nwunye m na-aga igbu m !!! Biko nyere !! - Mike
Kpọrọ ihe, echegbula. Ọ bụrụ na ị na-eji na ekwentị gị na-ọhụrụ foto ma ọ bụ vidiyo, e nwere ezi ohere n'ihi na ị na-agbake na-ehichapụ foto ndị si gị Motorala Photon 4G. New faịlụ nwere ike overwrite gị ehichapụ foto, na-eme ka mgbake ihe siri ike. Ya mere, lee ekwentị gị nke ọma mgbe ị na-izute nke a.
Nke mbụ niile, na-a Motorola Photon foto mgbake ngwá ọrụ: Wondershare Photo Iweghachite, ma ọ bụ Wondershare Photo Recovery for Mac. Ma nke foto mgbake omume na-pụrụ ịdabere na ọkachamara. Site na iji ya, ị nwere ike naghachi dum foto gị Motorola Photon 4G na 3 nzọụkwụ, n'agbanyeghị ma ị kwụsịrị ha ruru formatting, ihichapụ ma ọ bụ ụfọdụ ihe ndị ọzọ.
Ebe a bụ free ikpe version, i nwere ike ịgbalị Motorola Photon foto mgbake omume ugbu a. Dị nnọọ họrọ nri version nke usoro ihe omume maka kọmputa gị.
Rịba ama: Echefula na-echekwa pụta nke Doppler ma ọ bụrụ na ị ga-agbake hụrụ faịlụ mechara, iji zere data ọnwụ.
Nzọụkwụ nke na-agbake foto site na Motorola Photon 4G
Step1. Ẹkedori Motorola Photon foto mgbake omume
Mgbe launching usoro ihe omume, i kwesịrị jikọọ ekwentị gị na kọmputa na a dijitalụ USB, na-eme ka n'aka na ọ na-e achọpụtara. Wee pịa "Malite" button na isi interface na-amalite Motorola Photon foto mgbake.
Step2. Họrọ ka iṅomi niile ehichapụ faịlụ gị Motorola Photon 4G.
Step3. Ego na-agbake ehichapụ foto ndị si gị Motorola Photon 4G na otu Pịa.
Rịba ama: Unu ịzọpụta natara data na gị Motorola Photon ma ọ bụ na kaadị ebe nchekwa ọzọ. Chọta ebe ọzọ n'ihi na ọ dị ka na kọmputa gị ma ọ bụ ndị ọzọ na mpụga disk, maka nchekwa hà.
Olee otú Naghachi Photos si Motorola Droid
Olee otú Download na Wụnye ngwa ọdịnala na a Samsung Smartphone